Ny asa Fitoriana ny filazantsara.
« EZAHO NY FIANTSONAO FA AZA ATAO MALEMY » ( Isa. 58,1)
« Ho an’izay malalan’Andriamanitra sady voantso no masina : ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamantra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo » (Rom.1,7))
Misaotra an’ Andriamanitra isika nahatratra ity taona vaovao 2014 ity ka ny Tompo izay Andriamanitry ny famonjena antsika anie hanome antsika ny Fiadanany. Namela dindo tamin’ny taona 2013 izay nivalona ny krizy lavareny eto amin’ny firenentsika. Maro ireo toe-javatra nampalahelo sy nahaketraka. Maro koa ny nahafaly sy nahabe fanantenana. Nanamarika ny faramparan’ny taona 2013 ny fiatrehana ny fifidianana roa sosona teto amin’ ny firenena. Mbola betsaka ankehitriny ireo trangan-javatra samihafa izay mampiaina antsika anaty tebiteby ny amin’izay hitranga sy ny ho tohin’ny ho avy. Isaorana ny Tompo fa tsy miraviravy tànana ny maro fa mivavaka sy miandrandra an’Andriamanitra famonjena antsika ny amin’ izay hivahan’ ny olana. Koa miantso antsika rehetra hiorina amin’izany famonjen’Andriamanitra mahatoky izany , ary hiaina ny famonjena antsika amin’ny alalan’ny finoana omban’asa, ka hitaomana antsika mba :
Handala sy hiaina ny fahamarinana hatreny anivon’ny fiaraha-monina fototra, eo anivon’ny ankohonana, eo anivon’ny sehatra fanompoana ny Tompo, eo anivon’ny Fiangonana sy ny asa aman-draharaha rehetra sahanintsika an-davanandro.
Handala sy hiaina ny fahamarinana eo anivon’ny sehatra iombonana rehetra, manomboka eny amin’ny Fokontany, ny Faritra , ny Faritany ary ny Firenena manontolo na eo amin’ny sehatry ny Fiangonana izany na eo amin’ny sehatry ny fitantanam-panjakana.
Handala sy hiaina ny fahamarinana amin’ ny fifidianana rehetra atao satria ny fahamarinana manandratra ny firenena.
Ny FJKM dia mandray anjara mavitrika amin’ny fampihavanana tarihin’ ny FFKM eto amin’ ny firenena ; fampihavanana miorina amin’ny fanafahan’ny Filazantsara, fantatra amin’ny hoe 4F - FIBEBAHANA, FIAIKEN-KELOKA, FAHAMARINANA, FIAHAVANANA.
Koa manainga antsika, ry havana, mba hitondra am-bavaka ny fanohizana izany asa fampihavanana ataon’ny Fiangonana izany. Manamafy etoana koa ny iainantsika izany fampihavanana izany manomboka amintsika tsirairay ao anaty ao, eo anivon’ny ankohonana izay misy antsika, ny fokontany onenantsika, mba hiantraikan’izany amin’ny firenentsika.
Ho firosoana amin’ny fiainana ny fahamarinana sy ny fahamasinana marina ny finiavana hiaina ireo 4F ireo. Andriamanitry ny famonjena ny Andriamanitsika , mamonjy antsika amin’ny fahotana, manafaka antsika amin’ny fitiavan-tena, mamonjy antsika amin’ny fahafatesana ary mamaha ny mifatotra. Ny Fiangonana no mila maneho voalohany ny vokatry ny famonjena rehetra amin’ny fifadiana ny fanao ratsy rehetra (ITes 5:22) mba hahatonga ny firenena hiadana sy handry fahalemana.
"Ho an’Izay maharo anareo mba tsy ho tafintohina, ary hametraka anareo tsy hanan-tsiny eo anoloan’ny voninahiny amin’ny firavoravoana, ho an’Andriamanitra tokana , Mpamonjy antsika, amin’ny alalan’i Jesoa Tompontsika anie ny VONINAHITRA sy ny FAHALEBIAZANA , ny FANJAKANA sy ny FAHEFANA . Amena « (Joda 24)
Antananarivo, faha-17 Janoary 2014
Ny Biraon’ ny Mpiandraikitra Foibe
Ny Filohan’ ny FJKM
RASENDRAHASINA Lala, Mpitandrina
Vendredi 21 Février 2020 - 13:10:44